Tadidio fa ny tsirairay dia manana adidy hanao ny tsara indrindra ho an'ny tenany, tsy tokony hisy fihetseham-po na mampalahelo raha toa ka misy olona tsy mitovy hevitra aminao amin'ny vidiny na amin'ny teboka iray hafa. Tsy midika izany fa tsy hihetsika izy ireo fa tsy tokony ho izany mihitsy. Raha ny tena marina, tsy tokony hampiseho ny zavatra eritreretinao na fahatsapanao amin'ny fifampiraharahana mihitsy ianao - mitazàna azy ireo ho hevitra.
Tahaka izany koa dia tsy tokony hanana fihetseham-po na hiahiahy momba ny fomba hanokafana ny volanao ianao na hanolotra ny soso-kevitrao, raha miahy be loatra ianao fa tsy tokony hifampiraharaha mihitsy satria hanao ratsy ianao. Amin'ny tranga izay ahiahinao na sorena eo alohanao na mandritra ny fifampiraharahana dia tokony hajanonao ny fisarahana (ampiasao ny fialan-tsiny amin'ny fandehanana any amin'ny toeram-pivoahana ohatra) ary mametraha ny tenanao na mamelà olona iray hafa haka (Manana hamehana ianao hanaovana ny).
Tokony hanana ny tari-dalanao manokana momba ny zavatra tsara ho anao, tsy misy hafa, ho anao ihany. Nanao ny fikarohana ianao ary fantatrao izay tianao. Tsy resaka "mickey" na mijery izay azonao aleha - tokony hino ny toerana misy anao ianao, na hanome anao ny fifanarahana tianao na tokony handeha. Tokony hanana fifandraisana ampy ianao fa tsy mila an'ity olona ity amin'ny fomba ratsy.
Raha mahatsapa ianao fa tena tsy maintsy atao ity fifanarahana ity dia vonona ny handoa mihoatra noho izay tsara ho anao ianao, ka raha fohy dia aza miditra amin'ny fifampiraharahana izay tena ilainao raha tsy azonao atao ny mampiseho tsara ny fisokafana ny tononinao, mba hanoratana olona iray izay atokisanao amin'ireo mari-pamantarana ny fifanarahana tianao ary alefanao izy ireo tsy misy fepetra hanovana ny fepetra napetrakao.
Na dia ny fifanakalozana ara-barotra aza ny ankamaroan'ny fifampiraharahana mandra-pahitanao ny fifanarahana iray izay azonao iainana, dia tokony hametraka ny fetrany ianao ankoatra izay tsy handehananao satria "tsy misy ny fananana mety amin'ny vidiny ratsy".
Aza misalasala mihitsy ny maha-ara-drariny azy, ny olona dia miezaka manamboatra ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fanoratana zavatra efa napetraka mialoha na fanolorana ofisialy ho an'ny besinimaro, mifikira amin'ny fikarohana ataonao mba hanapa-kevitra raha ho anao izany ary tsy ho kivy.
Tokony hanosika ny sarany ianao ary hangataka alalana amin'ny hafa, raha tsy miteny izy ireo, mila mahatsapa ny olona fa niasa tamin'ny raharahany izy ireo, raha toa ka mora loatra ny fanombohan'ny fisalasalany dia nanao fifanarahana tsara izy ireo.
Alaivo sary an-tsaina raha toa ka mamely ny tanany amin'ny vidiny voalohany izay lazainy izy ireo, amin'ny voalohany dia ho faly izy ireo, fa hanontany azy ireo tsikelikely, "nanamavo zavatra aho", "mety ho azoko kokoa ny vola"Arakaraka ny" Eny dia afaka nahazo bebe kokoa aho ny vola! "Ary avy eo dia handresy lahatra ny tenany fa nanao ratsy izy ireo. Raha afaka mitsahatra izany izy ireo dia mety ho izany. Ampiasao izy ireo hiasa amin'ilay fifanarahana, dia ho sitrakao izy ireo.
Hanjary sarobidy kokoa ny fifanarahana ataonao ho an'izany - toy izany koa ny andaniny sy ny ankilany, koa mba ataovy ankasitrahany izany!